ဒီပို့လေးကို ယူထားလိုက် သင့်ချစ်သူ သင့်ဇနီး သင့်ခင်ပွန်း ဘယ်တော့မှ မဖောက်ပြန်ရဲတော့ဘူး။ - TAWTHU
ဒီပို့လေးကို ယူထားလိုက် သင့်ချစ်သူ သင့်ဇနီး သင့်ခင်ပွန်း ဘယ်တော့မှ မဖောက်ပြန်ရဲတော့ဘူး။
​ဖောက်​ပြန်​တတ်​တဲ့သူကို ပစ်​ထားပြီး ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ ပိုလှ​အောင်​​နေပါ..
ဒီစာ​​စောင်​​လေးကို ​ယောကျာ်း မိန်းမ မည်​သူမဆို ဖတ်​​ပေးပါ။
အထူးသဖြင့်​ အိမ်​​ထောင်​သည်​ ​မိန်းမ များအား အကြံ​ပေးစာအရ ​ရေးသားထားပါတယ်​ ။
စာရှည်​ရင်​ သည်းခံပြီး ဆုံး​အောင်​သာ ဖတ်​​ပေးဖို့ စာ​ရေးပြုစုသူ သိန်း​မောင်​​မောင်​ မှ အကြံပြု ​မေတ္တာရပ်​ခံပါရ​စေ…
​ဖောက်​ပြန်​တတ်​တဲ့ သတင်း​တွေ ချည်း ကြားကြား​နေရလို့​လေ…
ချစ်​သူ အိမ်​​ထောင်​ဖက်​ အခြားတစ်​​ယောက်​နဲ့ ​ဖောက်​ပြန်​​နေပြီဆိုရင်​ အသဲနာပြီ ​ဒေါသ​တွေထွက်​ အပြစ်​​တွေ အပြန်​အလှန်​တင်​ ရန်​ဖြစ်​ အအိပ်​ပျက်​ အစားပျက်​ပြီး…
ရုပ်​ပျက်​ ဆင်းပျက်​နဲ့ ​သေချင်​​လောက်​​အောင်​ စိတ်​ဆင်းရဲ့ ကိုယ်​ဆင်းရဲ ဖြစ်​ကြရပါတယ်​..။
အချို့ဆို ဘ၀ပျက်​ အနာဂတ်​​မေ့တဲ့ထိ ဖြစ်​ကြတာ ​တွေရတယ်​။ကျွန်​​နော်​အ​နေနဲ့ အဲ့ဒီလို့ မဖြစ်​ကြ​စေချင်​ပါဘူး။
အ​ရေးကြီးတာက​တော့ ​ဖောက်​ပြန်​ခံရတဲ့အခါ ကိုယ့်​အတွက်​ စိတ်​​ရောရုပ်​ပါ ထိခိုက်​မှုနည်းပါးစွာနဲ့ အလှမပျက်​ ဘ၀မပျက်​ပဲ့နဲ့ ရှင်​သန်​​နေဖို့ပါပဲ ။
သားသမီး​တွေ ​မွေးလိုက်​ရတဲ့အခါ ​သွေ​တွေအများကြီး ဆုံးရှုံး ခဲ့ရတယ်​ က​လေးများများယူ​လေ ရုပ်​မြန်​မြန်​ကျ​လေ ပါပဲ…
ဒါ​ပေမယ့်​ မိန်းမတိုင်းရဲ့ ​မေတ္တာ စိတ်​နဲ့ သားသမီး​ကို သာမက လင်​ကိုပါ ​ကောင်းရာမွန်​ရာ အစား​သောက်​​တွေ​ကျွေး ​ကောင်းမွန်​စွာ ၀တ်​ဆင်​​ပေးပြီး ပြုစုရင်း ထိန်းသိမ်းတတ်​ကြရပါတယ်​ ။
ဒါ​ကြောင့်​လည်း အချို့မိန်းမ​တွေက အသက်​ရလာတာနဲ့အမျှ အသားအရည်​ တွန့်​တာ အစားအ​သောက်​မှာလည်း ခြို့ခြံတာ​တွေ က​လေးငယ်​ငယ်​​လေးနဲ့ အိမ်​မှုကိစ္စတွေစတဲ့ စိတ်​ဖိစီးမှု​တွေက အမျိုးသား​တွေထက်​ ပိုခံစားကြရပါတယ်​ ။
အမျိုးသား​တွေကျ​တော့ အိမ်​​ထောင်​သက်​ရလာ​လေ စိုစို​ပြေ​ပြေနဲ့ တင့်​တယ်​လာကြ​လေ ပါပဲ။
အမျိုးသားတစ်​​ယောက်​ အိမ်​​ထောင်​ကျပြီးမှ အရင်​ကထက်​ပိုပြီး စို​ပြေတင့်​တယ်​လာတယ်​ ဆိုရင်​ သူအမျိုးသမီးရဲ့ ​ကျေးဇူး​ကြောင့်​ပါ။
အမျိုးသမီး တစ်​​ယောက်​ကလည်း အိမ်​​ထောင်​ကျပြီးမှ ပိုလှလာတယ်​ ပိုတင့်​တယ်​လာတယ်​ဆိုရင်​ သူ့ အမျိုးသားရဲ့ ​ကျေးဇူး​ကြောင်းပါ ။
အဲ့ဒီလို ပိုတင့်​တယ်​ လာတဲ့အချိန်​မှာ ကိုယ့်​ဘ၀ လက်​တွဲ့​ဖော်​ကိုပဲ ငြိး​ငွေ့သလိုလို စိတ်​ကိုပဲ တတ်​မက်​ သလိုလိုနဲ့ ဖြစ်​တတ်​ကြပါတယ်​..။
ဒီ​နေ့​ခေတ်​မှာ ​တော့……အွန်​လိုင်းက ​တွေ့တဲ့သူတိုင်း ပျိုပျို အိုအို မသိ စိတ်​သာယာမှု့ရှာရင်း လူချင်း​တွေ့ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်​။
အဲ့ဒီအချိန်​မှာ ကိုယ့်​စိတ်​ကို ကိုယ်​မထိန်းနိုင်​တဲ့ သူ​တွေ ​ကျေးဇူးတရား မသိတတ်​တဲ့ သူ​တွေ (ကျား/မ)က ​ဖောက်​ပြန်​တတ်​ကြပါတယ်​။
အိမ်​​ထောင်​​ရေး ​ဖောက်​ပြန်​ပြီ ဆိုတာ ကိုယ့်​ရဲ့ လက်​တွဲ​ဖော်​ ​ကျေးဇူးရှင်​ အ​ပေါ် သစ္စာ ​ဖောက်​ခြင်းပါပဲ။
ဒီလို သစ္စာ ​ဖောက်​ခံရပြီဆိုရင်​….ရင်​နာ​ကြေကွဲ ဘာလုပ်​သင့်​သလဲ ဆိုပြီး နီးစပ်​ရာကို အကြံဥာဏ်​ ​တောင်းယူ​လေ့ ရှိကြတယ်​။
အချို့က​ပြောတယ်​ သစ္စာ မဲ့တဲ့သူ စိတ်​ပြန်​လည်​လာ​အောင်​ ပိုပြီး ဂရုစိုက်​ပါတဲ့…
အချို့က​ပြောကြတယ်​ ဟိုတစ်​​ယောက်​ကို ​တွေ့ပြီး ​တောင်းပံကြည့်​ပါလားတဲ့…
အချို့က​ပြောကြတယ်​ သားသမီးကို ပိုဂရုစိုက်​ပြီး သူတို့ ကိုယ့်​ဘက်​ပါ​အောင်​ လုပ်​ခိုင်းပါတဲ့…
အဲဒီနည်းလမ်း​တွေဟာ ကျွန်​​နော့်​ အမြင်​မှာ​တော့ ခံရတဲ့သူအတွက်​ မတရားလှပါဘူး။
သူက အသစ်​နဲ့ ​ပျော်​​နေချိန်​မှာ ကိုယ်​က က​လေး​တွေကို ထိန်းပြီး စိတ်​ဖိစီးမှု​တွေနဲ့ အိမ်​အလုပ်​​တွေနဲ့ စိတ်​ဆင်းရဲ ကိုယ်​ဆင်းဏဲစွာ ဖြတ်​သန်းရမှာ​လေ…
ပြီး​တော့..စိတ်​ညစ်​တိုင်း ဘာသာ​ရေးလုပ်​တယ်​ ဆိုဦး​တော့ ကိုယ့်​က ၂၄ နာရီလုံး ဘာသာ​ရေးလုပ်​ပြီး ​နေနိုင်​သလား ​နေနိုင်​ရင်​​တော့ အ​ကောင်းဆုံး​ပေါ့​လေ…
ဒါ​ကြောင့်​ အ​ကြောင်း​ကြောင်း​ကြောင့်​ သစ္စာ ​ဖောက်​ခံ​နေရပြီလို့ ခံစားမိတာနဲ့ အရင်​ဆုံးလုပ်​ရမှာက သူ့ကို လိုက်​စုံစမ်းဖို့ ရန်​လုပ်​ဖို့ မလိုပါဘူး။
သူ့ကို မျက်​​ခြေမပျက်​ လိုက်​ပြီး အခဲခတ်​​နေရတာလည်း မလိုပါဘူး ဟိုတစ်​​ယောက်​ကို သွား​တွေ့ပြီး ​တောင်းပံစရာလည်း မလိုပါဘူး။
က​လေး​တွေ မျက်​နှာကြည့်​ပါ သစ္စာ မ​ဖောက်​ပါနဲ့လို့ ကိုယ့်​အိမ်​​ထောင်​ဖက်​ကို ဒူး​ထောက်​ ​တောင်းပံစရာ မလိုပါဘူး။အဲ့ဒါ​တွေက ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ပိုပြီး ထိခိုက်​ နစ်​နာ​စေပါတယ်​ ။
ပြီး​တော့ ​ဒေါသနဲ့ စိတ်​ကို မထိန်းနိုင်​ဖြစ်​ပြီး သူ့ကိုရန်​လုပ်​ပြီး ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ထိခိုက်​​စေမဲ့ အလုပ်​​တွေ လုပ်​​နေမဲ့အစားကဆင့်​မြင့်​တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ပြင်​ဆင်​လိုက်​ပါ…။
ဒါ​ကြောင့်​ သစ္စာ​ဖောက်​ ခံရပြီလို့ သိလိုက်​တာနဲ့ အရင်​ဆုံး သူ့ကို ဂရုစိုက်​ခဲ့တာ​တွေ ​ပေးဆပ်​ အနစ်​နာခံခဲ့တာ​တွေ အားလုံးကို လုံးဝ ရပ်​ပစ်​လိုက်​ပါ…။
ပစ်​ထားလိုက်​ပါ ပစ်​ထားခြင်းဆိုတာကလည်း ဥ​ပေက္ခာပြု​ခြင်း တစ်​မျိုးပါပဲ ။သူ့အ​ကြောင်းစဉ်းစားပြီး စိတ်​ညစ်​​နေမဲ့အစား မစဉ်းစားပဲနဲ့ ကိုယ့်​ဘ၀တိုးတက်​ဖို့ကို​ပြောင်းပြီး စဉ်းစားလိုက်​ပါ…
သူ့ရဲ့ သစ္စာမဲ့မှု​ကြောင့်​ ကိုယ့်​ရဲ့ စိတ်​​ရော ရုပ်​ပါ အထိအခိုက်​ ခံ​နေမဲ့အစား သူကို ပိုဂရုစိုက်​ပြီး သူ့​ရှေ့မှာ ဒူး​ထောက်​​နေမဲ့အစား ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ပိုချစ်​ပြီး ပို​ကောင်းလာ​အောင်​ ပိုပြီး အရည်​ချင်း​တွေ တက်​လာ​အောင်​ လုပ်​လိုက်​ပါ..။
ဒါ​ကြောင့်​ သစ္စာ​ဖောက်​တဲ့ နွားကို စား​ကောင်း ​သောက်​ဖွယ်​​တွေ ချက်​ပြုတ်​​ပေးစရာမလိုပါဘူး ။သားသမီး​တွေနဲ့အတူတူ အစား​အ​သောက်​ ​ကောင်း​ကောင်းစားပါ ၊ Shipping ထွက်​ပြီး စိတ်​​ပျော်​​အောင်​ ​နေပါ…
ခန္ဓာ ကိုယ်​ကို ပြန်​ထိန်းပါ လှ​အောင်​ပြင်​ဆင်​ပြီ ဆိုတာ နဲ့တင်​ စိတ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ တက်​ကြွ လန်းဆန်းမှု ဖြစ်​​စေပါတယ်​ ။ အစားအ​သောက်​ကို ​ကောင်း​ကောင်းစားပါ။(အ၀လွန်​မည့်​ အစား​သောက်​​တွေ​တော့ ​ရှောင်​ပါ ။ ၀တ်​စားဆင်​ယင်​မှု ဂရုတစိုက်​၀တ်​ပါ)
ကျန်းမာ​ရေးနဲ့ အသားအရည်​ပို​ကောင်း​အောင်​ အစားအ​သောက်​ ဂရုစိုက်​ပါ သူငယ်​ချင်း​တွေနဲ့ ပို​တွေ့ပြီး ရယ်​စရာ​တွေ ​ပြောပါ…
အဲ့ဒီလို စိတ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ ပြန်​လည်​ လန်းဆန်းလာပြီ ဆိုရင်​​တော့ ကိုယ့်​ဘ၀ရဲ့ အရည်​အ​သွေး တိုးတက်​​စေမည့်​ ကိစ္စ ​တွေ ​ဆောင်​ရွက်​ပါ …
သင်​တန်း​တွေ တက်​ချင်​ရင်​လည်း တက်​ပါ …ပညာသင်​တယ်​ဆိုတာ အရွယ်​အကန့်​သတ်​ မရှိပါဘူး။
ကိုယ့်​အရည်​ချင်း တိုးတက်​​လာ​လေ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ယုံကြည်​မှုပိုရှိပြီး ဘ၀မှာ ​နေလို့ထိုင်​လို့ ​ကောင်းလာ​လေပါပဲ့….
အဲ့ဒီလိုလုပ်​ရင်းနဲ့ တစ်​ဖက်​ကလည်း ကိုယ့်​အလုပ်​ထဲ့မှာ အလုပ်​ကို ပိုအာရုံစိုက်​လို့ ​အောင်​မြင်​မှု ရလာရင်​လည်း ကိုယ့်​ဘ၀ကို ​ကျေနပ်​ပြီ ဘ၀ကို ​နေ​ပျော်​လာပါတယ်​။
ကိုယ့်​ရဲ့ တိုးတက်​ ဖွဲ့ဖြိုးမှုဟာ သားသမီး​တွေ အတွက်​​ရော ကိုယ့်​ အတွက်​ပါ ခွန်​အား​ရော အင်​အားပါ ဖြစ်​​စေမှာပါ။
သားသမီး​တွေကလည်း စိတ်​ဓာတ်​ကျပြီး ငို​နေမဲ့ အ​မေမျိုးထက်​ ထက်​ထက်​မြတ်​မြတ်​နဲ့ အရာရာကို တည်​ငြိမ်​လှပစွာ ရင်​ဆိုင်​ ဖြတ်​သန်းမဲ့ အ​မေမျိုးကို ပိုလိုလား ကြပါတယ်​။
​ဖောက်​ပြန်​ခံရ​ပေမဲ့ အရှုံးမ​ပေး ၊ စိတ်​ဓာတ်​မကျပဲနဲ့ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ​ရော ဘ၀ကိုပါ အရင်​ကထက်​ ပိုလှ​အောင်​ ​နေပါလို့ ​ပြောချက်​ပါတယ်​။
ရုပ်​တင်​မက စိတ်​နဲ့ ဘ၀ပါ လှ​အောင်​ ကြိုးစား​ပြောင်းလဲဖို့ အကြံပြု တိုက်​တွန်းချင်​ပါတယ်​။
ခုလို ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ​ပြောင်းလဲခြင်းဟာ သစ္စာ ​ဖောက်​သူအ​ပေါ် က​လေ့စား​​ချေဖို့ မဟုတ်​ပါဘူး ကိုယ်​ကလည်း ​နောက်​အသစ်​တစ်​​ယောက်​နဲ့ ​ပျော်​ပါးဖို့ မဟုတ်​ပါဘူး။
သစ္စာ ​ဖောက်​တဲ့ သူအတွက်​ စိတ်​နဲ့ ရုပ်​သာမက အနာဂတ်​ကိုပါ အထိခိုက်​မခံပဲနဲ့ လှလှပပ ​ကျော့​ကျော့ ​မော့​မော့နဲ့ ဖြတ်​သန်း ကြ​စေချင်​ပါတယ်​။
ကိုယ့်​ဘ၀ကို လှပ​အောင်​ ဖန်​တီးဖို့အတွက်​ ကိုယ့်​မှာ တာဝန်​အရှိဆုံးပါ ။ ဒါ​ကြောင့်​ ကိုယ့်​ကို တန်းဖိုးထားပြီး ရင်​ဆိုင်​ပါ။
သစ္စာ​ဖောက်​ခံရ​ပေမဲ့ ဘ၀ကို အ​ရှုံးအ​ပေးဘဲနဲ့ တိုးတက်​စွာနဲ့ ​အောင်​မြင်​စွာ ဖြတ်​သန်း ​နေ​စေချင်​တာပါ။
ဒီ​နေရာမှာ ​ယောကျာ်းရဲ့ ၀င်​​ငွေကို မှီခို​နေရတဲ့ အမျိုးသမီး​တွေ အ​နေနဲ့လည်း ​ဖောက်​ပြန်​​နေတဲ့ ခင်​ပွန်းကို ​ငွေ​ကြောင်း သည်းခံပြီး ကြိပ်​မှိတ်​ ​ပေါင်း​နေရမဲ့ အစားကိုယ်​ပိုင်​၀င်​​ငွေ ရရှိ​အောင်​ ကြိုးစားသင့်​ပါတယ်​။
အချို့က ထင်​ကြပါတယ်​ ကိုယ့်​ကစွန့်​လွတ်​လိုက်​ရင်​ ဟိုမယားငယ်​က ပို​ပျော်​မှာ​ပေါ့လို့ ယူဆကြပါတယ်​ အဲ့ဒီအယူအဆ အမြဲတမ်း မမှန်​ပါဘူး။
လူဆိုတာ…လိုက်​ရင်​ ​ပြေးတတ်​တဲ့ သဘာဝရှိပါတယ်​ ။ ကိုယ်​က မလိုပဲနဲ့ ​နေတဲ့အခါ သူက ကိုယ့်​​နောက်​ကို ပြန်​လိုက်​လာပါလိမ့်​မယ်​ ။အဲ့ဒီအချိန်​ကို လှလှပပ ​စောင့်​ပြီး ​အောင်​မြင်​စွာ ဖြတ်​သန်းလိုက်​ပါ ။
သစ္စာမဲ့သူကို ​ပေါင်းခြင်း မ​ပေါင်းခြင်းဆိုတာ ကိုယ့်​ရဲ့ ဆုံးဖြတ်​ချက်​ အ​ပေါ်မှာ မူတည်​ ပါတယ်​ ။တကယ်​လို့ မတူတဲ့ အမြင်​များ ရှိခဲ့ရင်​ ​ဆွေး​နွေးဖို့ ဖိတ်​​ခေါ်ပါတယ်​….။
​မေတ္တာ ဖြင့်​သာ ​ရေးသားထားသည်​​လေးစားစွာဖြင့်​
​ဖောကျ​ပွနျ​တတျ​တဲ့သူကို ပဈ​ထားပွီး ကိုယျ့​ကိုကိုယျ​ ပိုလှ​အောငျ​​နပေါ..
ဒီစာ​​စောငျ​​လေးကို ​ယောကျြား မိနျးမ မညျ​သူမဆို ဖတျ​​ပေးပါ။
အထူးသဖွငျ့​ အိမျ​​ထောငျ​သညျ​ ​မိနျးမ မြားအား အကွံ​ပေးစာအရ ​ရေးသားထားပါတယျ​ ။
စာရှညျ​ရငျ​ သညျးခံပွီး ဆုံး​အောငျ​သာ ဖတျ​​ပေးဖို့ စာ​ရေးပွုစုသူ သိနျး​မောငျ​​မောငျ​ မှ အကွံပွု ​မတ်ေတာရပျ​ခံပါရ​စေ…
​ဖောကျ​ပွနျ​တတျ​တဲ့ သတငျး​တှေ ခညျြး ကွားကွား​နရေလို့​လေ…
ခဈြ​သူ အိမျ​​ထောငျ​ဖကျ​ အခွားတဈ​​ယောကျ​နဲ့ ​ဖောကျ​ပွနျ​​နပွေီဆိုရငျ​ အသဲနာပွီ ​ဒေါသ​တှထှေကျ​ အပွဈ​​တှေ အပွနျ​အလှနျ​တငျ​ ရနျ​ဖွဈ​ အအိပျ​ပကျြ​ အစားပကျြ​ပွီး…
ရုပျ​ပကျြ​ ဆငျးပကျြ​နဲ့ ​သခေငျြ​​လောကျ​​အောငျ​ စိတျ​ဆငျးရဲ့ ကိုယျ​ဆငျးရဲ ဖွဈ​ကွရပါတယျ​..။
အခြို့ဆို ဘဝပကျြ​ အနာဂတျ​​မတေဲ့ထိ ဖွဈ​ကွတာ ​တှရေတယျ​။ကြှနျ​​နျော​အ​နနေဲ့ အဲ့ဒီလို့ မဖွဈ​ကွ​စခေငျြ​ပါဘူး။
အ​ရေးကွီးတာက​တော့ ​ဖောကျ​ပွနျ​ခံရတဲ့အခါ ကိုယျ့​အတှကျ​ စိတျ​​ရောရုပျ​ပါ ထိခိုကျ​မှုနညျးပါးစှာနဲ့ အလှမပကျြ​ ဘဝမပကျြ​ပဲ့နဲ့ ရှငျ​သနျ​​နဖေို့ပါပဲ ။
သားသမီး​တှေ ​မှေးလိုကျ​ရတဲ့အခါ ​သှေ​တှအေမြားကွီး ဆုံးရှုံး ခဲ့ရတယျ​ က​လေးမြားမြားယူ​လေ ရုပျ​မွနျ​မွနျ​ကြ​လေ ပါပဲ…
ဒါ​ပမေယျ့​ မိနျးမတိုငျးရဲ့ ​မတ်ေတာ စိတျ​နဲ့ သားသမီး​ကို သာမက လငျ​ကိုပါ ​ကောငျးရာမှနျ​ရာ အစား​သောကျ​​တှေ​ကြှေး ​ကောငျးမှနျ​စှာ ဝတျ​ဆငျ​​ပေးပွီး ပွုစုရငျး ထိနျးသိမျးတတျ​ကွရပါတယျ​ ။
ဒါ​ကွောငျ့​လညျး အခြို့မိနျးမ​တှကေ အသကျ​ရလာတာနဲ့အမြှ အသားအရညျ​ တှနျ့​တာ အစားအ​သောကျ​မှာလညျး ခွို့ခွံတာ​တှေ က​လေးငယျ​ငယျ​​လေးနဲ့ အိမျ​မှုကိစ်စတှစေတဲ့ စိတျ​ဖိစီးမှု​တှကေ အမြိုးသား​တှထေကျ​ ပိုခံစားကွရပါတယျ​ ။
အမြိုးသား​တှကြေ​တော့ အိမျ​​ထောငျ​သကျ​ရလာ​လေ စိုစို​ပွေ​ပွနေဲ့ တငျ့​တယျ​လာကွ​လေ ပါပဲ။
အမြိုးသားတဈ​​ယောကျ​ အိမျ​​ထောငျ​ကပြွီးမှ အရငျ​ကထကျ​ပိုပွီး စို​ပွတေငျ့​တယျ​လာတယျ​ ဆိုရငျ​ သူအမြိုးသမီးရဲ့ ​ကြေးဇူး​ကွောငျ့​ပါ။
အမြိုးသမီး တဈ​​ယောကျ​ကလညျး အိမျ​​ထောငျ​ကပြွီးမှ ပိုလှလာတယျ​ ပိုတငျ့​တယျ​လာတယျ​ဆိုရငျ​ သူ့ အမြိုးသားရဲ့ ​ကြေးဇူး​ကွောငျးပါ ။
အဲ့ဒီလို ပိုတငျ့​တယျ​ လာတဲ့အခြိနျ​မှာ ကိုယျ့​ဘဝ လကျ​တှဲ့​ဖျော​ကိုပဲ ငွိး​ငှသေ့လိုလို စိတျ​ကိုပဲ တတျ​မကျ​ သလိုလိုနဲ့ ဖွဈ​တတျ​ကွပါတယျ​..။
ဒီ​နေ့​ခတျေ​မှာ ​တော့……အှနျ​လိုငျးက ​တှတေဲ့သူတိုငျး ပြိုပြို အိုအို မသိ စိတျ​သာယာမှု့ရှာရငျး လူခငျြး​တှဖေို့ ကွိုးစားကွတယျ​။
အဲ့ဒီအခြိနျ​မှာ ကိုယျ့​စိတျ​ကို ကိုယျ​မထိနျးနိုငျ​တဲ့ သူ​တှေ ​ကြေးဇူးတရား မသိတတျ​တဲ့ သူ​တှေ (ကြား/မ)က ​ဖောကျ​ပွနျ​တတျ​ကွပါတယျ​။
အိမျ​​ထောငျ​​ရေး ​ဖောကျ​ပွနျ​ပွီ ဆိုတာ ကိုယျ့​ရဲ့ လကျ​တှဲ​ဖျော​ ​ကြေးဇူးရှငျ​ အ​ပျေါ သစ်စာ ​ဖောကျ​ခွငျးပါပဲ။
ဒီလို သစ်စာ ​ဖောကျ​ခံရပွီဆိုရငျ​….ရငျ​နာ​ကွကှေဲ ဘာလုပျ​သငျ့​သလဲ ဆိုပွီး နီးစပျ​ရာကို အကွံဉာဏျ​ ​တောငျးယူ​လေ့ ရှိကွတယျ​။
အခြို့က​ပွောတယျ​ သစ်စာ မဲ့တဲ့သူ စိတျ​ပွနျ​လညျ​လာ​အောငျ​ ပိုပွီး ဂရုစိုကျ​ပါတဲ့…
အခြို့က​ပွောကွတယျ​ ဟိုတဈ​​ယောကျ​ကို ​တှပွေီ့း ​တောငျးပံကွညျ့​ပါလားတဲ့…
အခြို့က​ပွောကွတယျ​ သားသမီးကို ပိုဂရုစိုကျ​ပွီး သူတို့ ကိုယျ့​ဘကျ​ပါ​အောငျ​ လုပျ​ခိုငျးပါတဲ့…
အဲဒီနညျးလမျး​တှဟော ကြှနျ​​နျော့​ အမွငျ​မှာ​တော့ ခံရတဲ့သူအတှကျ​ မတရားလှပါဘူး။
သူက အသဈ​နဲ့ ​ပြျော​​နခြေိနျ​မှာ ကိုယျ​က က​လေး​တှကေို ထိနျးပွီး စိတျ​ဖိစီးမှု​တှနေဲ့ အိမျ​အလုပျ​​တှနေဲ့ စိတျ​ဆငျးရဲ ကိုယျ​ဆငျးဏဲစှာ ဖွတျ​သနျးရမှာ​လေ…
ပွီး​တော့..စိတျ​ညဈ​တိုငျး ဘာသာ​ရေးလုပျ​တယျ​ ဆိုဦး​တော့ ကိုယျ့​က ၂၄ နာရီလုံး ဘာသာ​ရေးလုပျ​ပွီး ​နနေိုငျ​သလား ​နနေိုငျ​ရငျ​​တော့ အ​ကောငျးဆုံး​ပေါ့​လေ…
ဒါ​ကွောငျ့​ အ​ကွောငျး​ကွောငျး​ကွောငျ့​ သစ်စာ ​ဖောကျ​ခံ​နရေပွီလို့ ခံစားမိတာနဲ့ အရငျ​ဆုံးလုပျ​ရမှာက သူ့ကို လိုကျ​စုံစမျးဖို့ ရနျ​လုပျ​ဖို့ မလိုပါဘူး။
သူ့ကို မကျြ​​ခွမေပကျြ​ လိုကျ​ပွီး အခဲခတျ​​နရေတာလညျး မလိုပါဘူး ဟိုတဈ​​ယောကျ​ကို သှား​တှပွေီ့း ​တောငျးပံစရာလညျး မလိုပါဘူး။
က​လေး​တှေ မကျြ​နှာကွညျ့​ပါ သစ်စာ မ​ဖောကျ​ပါနဲ့လို့ ကိုယျ့​အိမျ​​ထောငျ​ဖကျ​ကို ဒူး​ထောကျ​ ​တောငျးပံစရာ မလိုပါဘူး။အဲ့ဒါ​တှကေ ကိုယျ့​ကိုယျ​ကို ပိုပွီး ထိခိုကျ​ နဈ​နာ​စပေါတယျ​ ။
ပွီး​တော့ ​ဒေါသနဲ့ စိတျ​ကို မထိနျးနိုငျ​ဖွဈ​ပွီး သူ့ကိုရနျ​လုပျ​ပွီး ကိုယျ့​ကိုယျ​ကို ထိခိုကျ​​စမေဲ့ အလုပျ​​တှေ လုပျ​​နမေဲ့အစားကဆငျ့​မွငျ့​တဲ့ နညျးလမျးနဲ့ ကိုယျ့​ကိုယျ​ကို ပွငျ​ဆငျ​လိုကျ​ပါ…။
ဒါ​ကွောငျ့​ သစ်စာ​ဖောကျ​ ခံရပွီလို့ သိလိုကျ​တာနဲ့ အရငျ​ဆုံး သူ့ကို ဂရုစိုကျ​ခဲ့တာ​တှေ ​ပေးဆပျ​ အနဈ​နာခံခဲ့တာ​တှေ အားလုံးကို လုံးဝ ရပျ​ပဈ​လိုကျ​ပါ…။
ပဈ​ထားလိုကျ​ပါ ပဈ​ထားခွငျးဆိုတာကလညျး ဥ​ပက်ေခာပွု​ခွငျး တဈ​မြိုးပါပဲ ။သူ့အ​ကွောငျးစဉျးစားပွီး စိတျ​ညဈ​​နမေဲ့အစား မစဉျးစားပဲနဲ့ ကိုယျ့​ဘဝတိုးတကျ​ဖို့ကို​ပွောငျးပွီး စဉျးစားလိုကျ​ပါ…
သူ့ရဲ့ သစ်စာမဲ့မှု​ကွောငျ့​ ကိုယျ့​ရဲ့ စိတျ​​ရော ရုပျ​ပါ အထိအခိုကျ​ ခံ​နမေဲ့အစား သူကို ပိုဂရုစိုကျ​ပွီး သူ့​ရှမှေ့ာ ဒူး​ထောကျ​​နမေဲ့အစား ကိုယျ့​ကိုယျ​ကို ပိုခဈြ​ပွီး ပို​ကောငျးလာ​အောငျ​ ပိုပွီး အရညျ​ခငျြး​တှေ တကျ​လာ​အောငျ​ လုပျ​လိုကျ​ပါ..။
ဒါ​ကွောငျ့​ သစ်စာ​ဖောကျ​တဲ့ နှားကို စား​ကောငျး ​သောကျ​ဖှယျ​​တှေ ခကျြ​ပွုတျ​​ပေးစရာမလိုပါဘူး ။သားသမီး​တှနေဲ့အတူတူ အစား​အ​သောကျ​ ​ကောငျး​ကောငျးစားပါ ၊ Shipping ထှကျ​ပွီး စိတျ​​ပြျော​​အောငျ​ ​နပေါ…
ခန်ဓာ ကိုယျ​ကို ပွနျ​ထိနျးပါ လှ​အောငျ​ပွငျ​ဆငျ​ပွီ ဆိုတာ နဲ့တငျ​ စိတျ​ပိုငျးဆိုငျ​ရာ တကျ​ကွှ လနျးဆနျးမှု ဖွဈ​​စပေါတယျ​ ။ အစားအ​သောကျ​ကို ​ကောငျး​ကောငျးစားပါ။(အဝလှနျ​မညျ့​ အစား​သောကျ​​တှေ​တော့ ​ရှောငျ​ပါ ။ ဝတျ​စားဆငျ​ယငျ​မှု ဂရုတစိုကျ​ဝတျ​ပါ)
ကနျြးမာ​ရေးနဲ့ အသားအရညျ​ပို​ကောငျး​အောငျ​ အစားအ​သောကျ​ ဂရုစိုကျ​ပါ သူငယျ​ခငျြး​တှနေဲ့ ပို​တှပွေီ့း ရယျ​စရာ​တှေ ​ပွောပါ…
အဲ့ဒီလို စိတျ​ပိုငျးဆိုငျ​ရာ ပွနျ​လညျ​ လနျးဆနျးလာပွီ ဆိုရငျ​​တော့ ကိုယျ့​ဘဝရဲ့ အရညျ​အ​သှေး တိုးတကျ​​စမေညျ့​ ကိစ်စ ​တှေ ​ဆောငျ​ရှကျ​ပါ …
သငျ​တနျး​တှေ တကျ​ခငျြ​ရငျ​လညျး တကျ​ပါ …ပညာသငျ​တယျ​ဆိုတာ အရှယျ​အကနျ့​သတျ​ မရှိပါဘူး။
ကိုယျ့​အရညျ​ခငျြး တိုးတကျ​​လာ​လေ ကိုယျ့​ကိုယျ​ကို ယုံကွညျ​မှုပိုရှိပွီး ဘဝမှာ ​နလေို့ထိုငျ​လို့ ​ကောငျးလာ​လပေါပဲ့….
အဲ့ဒီလိုလုပျ​ရငျးနဲ့ တဈ​ဖကျ​ကလညျး ကိုယျ့​အလုပျ​ထဲ့မှာ အလုပျ​ကို ပိုအာရုံစိုကျ​လို့ ​အောငျ​မွငျ​မှု ရလာရငျ​လညျး ကိုယျ့​ဘဝကို ​ကနြေပျ​ပွီ ဘဝကို ​နေ​ပြျော​လာပါတယျ​။
ကိုယျ့​ရဲ့ တိုးတကျ​ ဖှဲ့ဖွိုးမှုဟာ သားသမီး​တှေ အတှကျ​​ရော ကိုယျ့​ အတှကျ​ပါ ခှနျ​အား​ရော အငျ​အားပါ ဖွဈ​​စမှောပါ။
သားသမီး​တှကေလညျး စိတျ​ဓာတျ​ကပြွီး ငို​နမေဲ့ အ​မမြေိုးထကျ​ ထကျ​ထကျ​မွတျ​မွတျ​နဲ့ အရာရာကို တညျ​ငွိမျ​လှပစှာ ရငျ​ဆိုငျ​ ဖွတျ​သနျးမဲ့ အ​မမြေိုးကို ပိုလိုလား ကွပါတယျ​။
​ဖောကျ​ပွနျ​ခံရ​ပမေဲ့ အရှုံးမ​ပေး ၊ စိတျ​ဓာတျ​မကပြဲနဲ့ ကိုယျ့​ကိုယျ​ကို ​ရော ဘဝကိုပါ အရငျ​ကထကျ​ ပိုလှ​အောငျ​ ​နပေါလို့ ​ပွောခကျြ​ပါတယျ​။
ရုပျ​တငျ​မက စိတျ​နဲ့ ဘဝပါ လှ​အောငျ​ ကွိုးစား​ပွောငျးလဲဖို့ အကွံပွု တိုကျ​တှနျးခငျြ​ပါတယျ​။
ခုလို ကိုယျ့​ကိုယျ​ကို ​ပွောငျးလဲခွငျးဟာ သစ်စာ ​ဖောကျ​သူအ​ပျေါ က​လစေ့ား​​ခဖြေို့ မဟုတျ​ပါဘူး ကိုယျ​ကလညျး ​နောကျ​အသဈ​တဈ​​ယောကျ​နဲ့ ​ပြျော​ပါးဖို့ မဟုတျ​ပါဘူး။
သစ်စာ ​ဖောကျ​တဲ့ သူအတှကျ​ စိတျ​နဲ့ ရုပျ​သာမက အနာဂတျ​ကိုပါ အထိခိုကျ​မခံပဲနဲ့ လှလှပပ ​ကြော့​ကြော့ ​မော့​မော့နဲ့ ဖွတျ​သနျး ကွ​စခေငျြ​ပါတယျ​။
ကိုယျ့​ဘဝကို လှပ​အောငျ​ ဖနျ​တီးဖို့အတှကျ​ ကိုယျ့​မှာ တာဝနျ​အရှိဆုံးပါ ။ ဒါ​ကွောငျ့​ ကိုယျ့​ကို တနျးဖိုးထားပွီး ရငျ​ဆိုငျ​ပါ။
သစ်စာ​ဖောကျ​ခံရ​ပမေဲ့ ဘဝကို အ​ရှုံးအ​ပေးဘဲနဲ့ တိုးတကျ​စှာနဲ့ ​အောငျ​မွငျ​စှာ ဖွတျ​သနျး ​နေ​စခေငျြ​တာပါ။
ဒီ​နရောမှာ ​ယောကျြားရဲ့ ဝငျ​​ငှကေို မှီခို​နရေတဲ့ အမြိုးသမီး​တှေ အ​နနေဲ့လညျး ​ဖောကျ​ပွနျ​​နတေဲ့ ခငျ​ပှနျးကို ​ငှေ​ကွောငျး သညျးခံပွီး ကွိပျ​မှိတျ​ ​ပေါငျး​နရေမဲ့ အစားကိုယျ​ပိုငျ​ဝငျ​​ငှေ ရရှိ​အောငျ​ ကွိုးစားသငျ့​ပါတယျ​။
အခြို့က ထငျ​ကွပါတယျ​ ကိုယျ့​ကစှနျ့​လှတျ​လိုကျ​ရငျ​ ဟိုမယားငယျ​က ပို​ပြျော​မှာ​ပေါ့လို့ ယူဆကွပါတယျ​ အဲ့ဒီအယူအဆ အမွဲတမျး မမှနျ​ပါဘူး။
လူဆိုတာ…လိုကျ​ရငျ​ ​ပွေးတတျ​တဲ့ သဘာဝရှိပါတယျ​ ။ ကိုယျ​က မလိုပဲနဲ့ ​နတေဲ့အခါ သူက ကိုယျ့​​နောကျ​ကို ပွနျ​လိုကျ​လာပါလိမျ့​မယျ​ ။အဲ့ဒီအခြိနျ​ကို လှလှပပ ​စောငျ့​ပွီး ​အောငျ​မွငျ​စှာ ဖွတျ​သနျးလိုကျ​ပါ ။
သစ်စာမဲ့သူကို ​ပေါငျးခွငျး မ​ပေါငျးခွငျးဆိုတာ ကိုယျ့​ရဲ့ ဆုံးဖွတျ​ခကျြ​ အ​ပျေါမှာ မူတညျ​ ပါတယျ​ ။တကယျ​လို့ မတူတဲ့ အမွငျ​မြား ရှိခဲ့ရငျ​ ​ဆှေး​နှေးဖို့ ဖိတျ​​ချေါပါတယျ​….။
​မတ်ေတာ ဖွငျ့​သာ ​ရေးသားထားသညျ​​လေးစားစှာဖွငျ့​
အနေတည်တယ် သွေးအေးတယ်.. ဒီ မိန်းကလေးကို ချစ်မိပြီဆိုရင် ဒီ (၅) ချက်ကို မဖြစ်မနေ သိထားရပါမယ်…
မကြာခင် ရောက်လာတော့မယ့် (Valentine’s Day) ဆိုတဲ့ ချစ်သူများနေ့ဟာ လင်မယားနေ့ မဟုတ်ဘူးနော်..
ဒီနေ့ နာမည်အကြီးဆုံး ပို့လေးတစ်ခု… တောင်တွင်းကြီးက ကောင်လေးတစ်ယောက် သူ့ချစ်သူကို တန်ဖိုးရှိရှိတင်တောင်းတဲ့ သတင်းလေး